DepositPhotos: Yakachipa Royalty-Yemahara Mifananidzo Yemaficha ine Reverse Image Lookup! | Martech Zone
Isu tinoshandisa tani ye madzimambo-emahara emasheya mafoto. Kubva kumasayiti edu, mablog blog, machena mapepa, pamwe nezvose zvirimo zvatinogadzirira vatengi, yedu stock foto bhiri yaive mazana emadhora pamwedzi. Zvaiita sekunge pandakango zadza iyo account, yaizove isina chinhu mukati mevhiki kana zvakadaro. Isu takabhadhara mimwe mitengo inorema ine inozivikanwa nzvimbo yemasaiti saiti.
Chii chinonzi Royalty-Mahara
Royalty-yemahara, kana RF mifananidzo, bvumidza kushomeka kwemifananidzo pasina kudikanwa kwekubhadharira kushandiswa kwega kwega Semuenzaniso, kana tikatenga chifananidzo chisina mubhadharo chesaiti yedu, tinogona kuchishandisa kakawanda pane yedu saiti uye mune yedu chibvumirano (zvinoenderana nemutengesi). Nekudaro, isu hatigone kutengesa kana kuishandisa kune mutengi wedu. Uye kana tikazvishandisa kune mutengi wedu, hatigone kuishandisa isu pachedu. Ive nekuchengera zvakanyanya pakuverenga iyo yakanaka kudhinda pane kushandiswa! Zvimwe ndezvekushandira zvisiri zvekushambadzira chete, zvimwe zvinogona kunge zvine nguva kana huwandu hwekushandisa hushoma.
Kana iwe ukatyora mazwi ekushandisa pamifananidzo yako yemahara, unogona kurohwa netsamba kubva kumuridzi wekodzero. Ivo vanowanzoda mazana kana zviuru zvemadhora vachidzosera iko kushandiswa zvisirizvo… uye nekutyisidzira matanho epamutemo kana iwe usingaite. Vanhu vazhinji vanongodzidza chidzidzo chavo, vanobhadhara chikwereti, uye kuenda mberi.
Marii Inodhura Yemahara-Yemahara Stock Mifananidzo Mari?
Kune akasiyana siyana emitengo yemastock mafoto uye mazhinji mapuratifomu anoshanda pane poindi system. Iwe unonyatsoda kududzira iyo kiredhiti kumadhora. Mamwe mapeni mashoma, zvinoenderana nesaizi yemufananidzo… mamwe anogona kuve akati wandei madhora pamufananidzo. Uye zvimwe zvakadaro mutengo pamufananidzo pakushandisa!
Isu hatina kunetseka kubhadhara zvakati wandei nekuti isu taiziva kutsoropodza kwemifananidzo kune zvese zvataiita. Vanhu vanorerutsa zvakanyanya kukanganisa kunoitwa nemufananidzo wakanaka pane meseji yavari kuyedza kutaura. Uye vanhu vanoshandisa Google Image Kutsvaga uye vanovimba nekutsvaga kwavo kwemahara-vari kukumbira dambudziko! Kazhinji kacho chifananidzo chinoshandiswa zvisirizvo uye Google Image Tsvaga ichiiwana kubva kunzvimbo yekushandisa zvisirizvo, ichiratidza kuti haina humambo kana isiri iyo.
Ichokwadi… Mufananidzo Wakakosha Chiuru Chemashoko
Tiri kurarama munyika inoonekwa. Saka kana iwe uchida kubhadhara mazana emadhora pane zvemukati, kuisa mari mune yakanaka chifananidzo hakuna-brainer! Uye DepositPhotos ingo wedzera Reverse Image chishandiso kune kwavo kusanganisa! Beyond mapikicha, ivo zvakare vanopa:
Vector Mifananidzo - Tora kutanga kutanga nekugadzira whitepaper kana infographic ine yavo inoshamisa iconography seti nezvimwe mifananidzo ye vector.
Illustrations - Haudi vector? Ingo tora iyo mifananidzo isina humambo unoda.
Videos - Unoda kuisa imwe yemavhidhiyo vhidhiyo yekumashure kune yako saiti kana imwe stock vhidhiyo yeako anotevera vhidhiyo musanganiswa? Vane sarudzo huru.
Mharidziro Mifananidzo - Kutsvaga mimwe mifananidzo yekusaita-zvekushandisa? Vane sarudzo hombe yechiratidzo neyevakakurumbira mafoto anogona kushandiswa pakurongedza zvemukati.
mumhanzi - Unoda imwe mimhanzi yepodcast kana vhidhiyo intro uye kunze? Vane sarudzo huru futi!
Yakanga isiri iyo kusvika timu yacho pa Depositphotos akandibata nezvebhurogi redu uye mashandisiro edu emastock mapikicha andakaona kuti taive tichishandisa mari yakawandisa kupfuura zvataigona kuva. Depositphotos rava mutsigiri wedu uye tichipa mapikicha edu emastock ku Martech Zone pamwe nemamwe makambani angu. Nepo icho chiri chibvumirano chinoshamisa kwatiri, mitengo yako iwe inoshamisa zvakare!
Kune yakaderera kunge $ 29 pamwedzi, unogona kushandisa kusvika ku30 madzimambo-emahara emasheya mifananidzo mwedzi wega kubva Depositphotos! Ndiwo mutengo unoshamisa uye wakanaka kune avhareji bhizinesi ari kuburitsa blog mablog, mapepa evachena, nyaya dzenyaya, kufona-kune-zviito, webhu dhizaini, uye mapeji anomhara! Wedzera yemahara-yemahara stock foto kune yako meseji uye iwe uchaona kuvandudzwa kwako mhedzisiro ichave!
Saina Kuti Uwane Depositphotos
Kuzivisa: Tiri kushandisa yedu affiliate link yeDepositPhotos mune ino posvo!
Tags: wobvatsvaga mifananidzo onlinegoogle chifananidzo chekutsvagareverse mufananidzoreverse mufananidzo wekutarisarfmadzimambo akasunungukamadzimambo-emahara emasheya mafotoSponsormifananidzo yemasheya